Al-shabaab oo u hanjabtay Lars Vilks | Somaliska
Mid ka mid ah xubnaha Xarakada Al-shabaab ayaa hanjabaad dil ah u soo diray ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks kaasoo sawiray kartoono eey uu ku matalay Nabi Maxamed (SCW). "Meel kasta oo aad joogtid, hadaysan dhicin maanta ama bari, la soco in aanan ku iloobin" ayuu ku yiri fariin muuqaal ah midka mid ah xubnaha Al-shabaab Abu Zaid. "Gacanta ayaan kugu soo dhigi doonaa Ilaahay idankiis meelkasta oo aad joogto iyo goob kasta oo aad ku dhuumanayso. La soco waxa ku sugaaya, waa qoor gooyo waayo waa waxa aad astaahishid. Walaalaha Muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay dilaan eygaan waxaad Allah kaga helaysaan ajar" Ayuu ku yiri Abu Zaid fariinta oo English ku qornayd. The Local
Al-shabaab oo u hanjabtay Lars Vilks
Mid ka mid ah xubnaha Xarakada Al-shabaab ayaa hanjabaad dil ah u soo diray ninka Swedishka ah ee lagu magacaabo Lars Vilks kaasoo sawiray kartoono eey uu ku matalay Nabi Maxamed (SCW).
“Meel kasta oo aad joogtid, hadaysan dhicin maanta ama bari, la soco in aanan ku iloobin” ayuu ku yiri fariin muuqaal ah midka mid ah xubnaha Al-shabaab Abu Zaid.
“Gacanta ayaan kugu soo dhigi doonaa Ilaahay idankiis meelkasta oo aad joogto iyo goob kasta oo aad ku dhuumanayso. La soco waxa ku sugaaya, waa qoor gooyo waayo waa waxa aad astaahishid. Walaalaha Muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay dilaan eygaan waxaad Allah kaga helaysaan ajar” Ayuu ku yiri Abu Zaid fariinta oo English ku qornayd.